Wararka Maanta: Arbaco, Aug 29, 2018-Ciidamada Liyuu Booliiska dowlad deegaanka oo sii shaqeyn doona
Taliyaha cusub ee ciidanka Liyuu Booliiska
Arbaco, August, 29, 2018 (HOL) – Tan iyo markii ay dhaceen rabshadihii siyaasadeed ee keenay in ay dhacdo xukuumadii hore ee dowlad deegaan-ka, waxaa si is daba joog ah u soo baxayay warar sheegayay in dowladda dhexe ee federaalka Itoobiya dabacsan tahay in la kala diro gabi ahaan-ba ciidamada Liyuu Booliiska ee ka howlgala dowlad deegaanka Soomaalida.
Laakiin hadda waxaa meesha ka baxay shakigii arintaan ku saabsanaa kaddib markii madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka Soomaaliya Mustafe Cagjar uu taliye cusub u u magacaabay ciidamada oo uu aas-aasay madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Cabdi Maxamuud Cumar.
Maxamed Cabdi Mawsar ayaa noqonaya taliyaha guud ee ciidamada Liyuu Booliiska, waxaana la sheegay shir deg deg ah oo yeesheen madaxweynaha iyo taliyaha cusub waxaa ay ka wada hadleen amniga gobolka iyo sidii ay ciidamadu u noqon lahaayeen kuwo ka madax-bannaan siyaasada.
‘’Ciidamada Liyuu Booliisku ma’aha ciidamo shisheeye, sidaa daraadeed isbadalka maamulka ku dhacay iyaga ma saameynayo’’ ayuu yiri ku-simaha madaxweynaha dowlad deegaanka, islamarkaana madaxweyne ku-xigeen.
Waxaa jiray muddo dheeer-ba eedeymo culus oo loo jeedinayay ciidamada oo la sheegay in ay laftirkooda qeyb ka ahaayeen xadgudubyo ka dhacay deegaanka oo isugu jiray dilal bareer ah, jir dil, iyo waliba dhaca hantid dadweyne, hasse ahaatee saraakiisha Liyuu Booliiska ayaa inta badan ku doodayay in dadka arrimahaa ku kacaya yihiin kuwo sheeganaya magaca ciidamada oo aan wax shaqo ah ku laheyn.
Maamulka cusub ayaa u muuqda mid hadda fiiri-gaar ah u leh dhaqdhaqaaqyo ay deegaanka ka sameeyaan dad taageersan madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar oo hadda xabsi ku jira.